Iibso baaskiil kaarboonka birta koronto | ebike Shuangye
Bogga ugu weyn Products baaskiil koronto baaskiilka buurta Baaskiil kaarboon koronto koronto 26-inji oo isku dhafan A6CB26M
Jir: Faylka kaarboon
Batariga: 36V 10Ah batteriga dhalada removbale
Biriigyada: Fariin birta farsamaysan 160
Xawaaraha ugu badan: 25k-30m / saacaddii
Xamuulka ugu badan: 120kg-150kg
Baaskiil kaarboonka korantada korontada ku shaqeeya ee 26-inji leh
Faylka kaarboonku sidoo kale waa shey baaskiil weyn oo ay ugu mahadcelinayaan adkeyntiisa, itaal darridiisa iyo ku-xirnaantiisa. Iyada oo ku saleysan feactor ee wax jir, miisaanka baaskiil fiber carbon waa ka fudud yahay jir daawaha aluminium. Faa'iidada ugu weyn ee fuulayaasha guud waa comfot fuulitaanka baaskiil kaarboonka korontada ku shaqeeya. Iyo baaskiilkan koronto-dhaliyaha korontada ku shaqeeya sidoo kale wuxuu la socdaa labo waran oo isku-dhafan oo magnesium ah oo 26-inji ah. Haddii aadan jeclayn baaskiil koronto culus iyo baaxad leh, baaskiil kaarboonka korantada ee korontada ku shaqeeya ayaa kugu habboon adiga, taas oo ah mid fudud, duufaan leh, oo waarta.
Baaskiilkan kaarboon korantada ah ee korantada ku shaqeeya oo leh 250w ama 350w matoor buraash la'aan ah oo ku socda giraangirta dambe si kor loogu qaado kicinta baaskiil si loo badbaadiyo wadayaasha tamar badan. Mashiinka korontada sameeyaa wuxuu ka dhigayaa baaskiil kaarboonka korantada korantada fudud inuu gaaro xawaaraha ugu badan 25-30km / h. Xitaa haddii fuulitaanka xawaaraha sare ama koritaanka, mootadu had iyo jeer waxay siisaa awood ku filan wadayaasha si ay u helaan baahidooda raacitaanka.
36v batari lithium dhalo ah ayaa sameeya baaskiilkan fiber-ka ah ee kaarboon kaarboon wuxuu raaci karaa ilaa 40-60km hal mar oo keliya. La hadal lacag-bixinta, Sidoo kale waa ku habboon tahay inaad ku buuxiso batariga sababtoo ah naqshad la saari karo. Kaliya batteriga furaha ka soo bax ka dibna raadi god aad ku buuxiso xeedho la keenay 42V 2A, waqtiga lacag bixinta waa qiyaastii 5-7 saacadood.
Display iyo Handlebar
Si ay wadayaashu u ogaadaan baaskiil wadista macluumaadka waqtiga-dhabta ah, baaskiilkan fiber-ka korantada leh ee korontada ku shaqeeya oo leh qalab LCD aan biyuhu ka muuqan oo lagu rakibay bartamaha mashiinka, waxaad ogaan kartaa inta ka hartay awoodda batteriga, heerkulka, xawaaraha fuulista, mootada waqtiga dhabta ah awood, wadar safar, iyo inbadan. Iyada oo ku saleysan macluumaadka, waxaad hagaajin kartaa qorshahaaga fuulitaanka. Waxaa jira xawaare 21 iskuwareejiye isku dheji ah iyo bareegyada bareega waxay ka dhigayaan ridre inuu si fudud qalabka u beddelo una jebiyo baaskiilka Tuujinta suulka waxay isku daraan qaabka Pedal-Assist wuxuu keenaa wadayaasha laba xulasho raacitaan.
Si loo hubiyo badbaado kasta oo fuushan, ku koronto 160 bareeg mashiinka hore iyo kan dambe. Xitaa haddii ay ku jirto cimilo qoyan ama qabow ama xaaladaha degdegga ah. waxay isla markiiba bixin kartaa xoog biriiga xoog leh si aad u baaskiil. Waxaa sidoo kale jira sii deyn deg deg ah oo lagu dhejiyo gawaarida hore, way fududahay in laga saaro giraangirta hore markaad u baahan tahay. Marka laga reebo jejebiinta qalabka farsamada, waxaa jira kala-jejebin farsamo farsamo ah ayaa la dooran karaa.
Gawaarida Naafada ah
Daawada isku-dhafan ee 'Magnesium alloy' oo isku-dhafan oo dheellitiran, waxay la socotaa xawaare sare iyo qaddarro fara badan oo faras iyo xaddiga si fudud oo qaraabo ah. Dabeecadda adag ee aan dabacsanayn ayaa sidoo kale ka dhigaysa giraangiraha isku-dhafan ee magnesium-ka isku-dhafan in la saadaalin karo marka la fuushan yahay, gaar ahaan xawaaraha sare ee geeska halkaasoo xasilloonida iyo joogtayntu muhiimadda koowaad leeyihiin.
Haddii aad xiiseyneyso baaskiilka korantada ee korantada, nala soo xiriir fadlan.
Baaskiilado badan oo koronto leh: 29-inji isugeyn mtb koronto isku dhafan, ebike buur caan ah, 26 tire Taayirada dufanka badan ee baaskiil koronto, 26/28 inji baaskiil koronto magaalada
Tags:kaarboon baaskiil koronto koronto baaskiilada kaarboon koronto-koronto
Ka hor: 29 * 2.35 inji oo koronto ku caawisa baaskiilka buuriga loogu talagalay dadka waaweyn A6AH26